“Mauritius International Art Fair”: haneho ny sanganasany sy hifananinana i Ramy Rentia | NewsMada
“Mauritius International Art Fair”: haneho ny sanganasany sy hifananinana i Ramy Rentia
Nivoaka tao anatin’ilay fifaninanana tetikasa kolontsaina nokarakarain’ny CGM ny anaran’i Ramy Rentia. Nahazo voalohany tamin’izany mantsy ilay tetikasa “#Moi”, niarahany nanatontosa tamin’i Anjara Rasoanaivo, reniny. Nampiaraka ny “video-poésie” sy ny “digital painting” ny nataon’izy mianakara tamin’izany. Tetsy ankilany, nampiranty hosodoko 12 tao amin’ny Das Haus Ankadifotsy ihany koa i Ramy Rentia…
Izay nahita sy mahafantatra ity tovovavy vao 15 taona monja ity, niteny avokoa fa manan-talenta, ary an-dalam-pitrandrahana izany izy. Anisan’ireo voafidy handray anjara amin’ny andiany voalohany amin’ilay hetsika “Mauritius International Art Fair”, hontontosaina any Nosy Maorisy ny 8 hatramin’ny 11 aogositra izao izy.
Hitondra hosodoko iray, nampisaloranyny anarana “J’explose”, ao amin’ny tranoheva Madagasikara, izy mandritra io hetsika io. Haneho ny “digital painting” mivantana ihany koa, arahina fiantsana tononkalo, mifanaraka amin’ny lohahevitra nosafidin’ny mpikarakara.
Marihina fa mpianatra ao amin’ny sekoly manofana momba ny teknolojia, ny E-Media, i Ramy Rentia. Ao amin’ny sokajy “images” ny misy azy ka ny manodidina ny sary rehetra no rantoviny ao.